Coulda Me Kwakandiwanisa — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
moyo wangu rinorema. Ndinoziva Mwari akanaka, uye kuti Iye kudzora, asi moyo wangu rinorema.
Last vhiki pashure nezvakaitika Ferguson (uye mhinduro pamusoro evanhu vezvenhau), Ini vainzwa kunyora rwiyo. Chinangwa changu chaiva haana kuita chero huru mashoko kana kuzivisa, asi kuratidza nenzira zvose ndisanzwa. Saka ndakatanga kunyora, uye izvi ndizvo vakabuda. NaA dzichidairira mupfungwa dzangu yakanga: "Zvinogona kunge ini ndaivapo."
Ndaiva yose mumhanyi wakagadzirira sei vaKristu vanofanira kupindura munguva yakaita izvi, asi pashure mashoko pamusoro Eric Garner zuro, Ndakasarudza kumirira uye pambiru kuti gare gare. For ikozvino, Ndinoda kutaura kuti ndine rinorema mwoyo. Ndiri izvozvi vasingangofariri nharo kana nharo. Ini chete vanoda rusununguko kuratidza kundikuvadza.
Ndiri vachikuvadza nekuti kuti Eric Garner vhidhiyo ndichiiparadza kurinda. Apo mudzimai wangu uye ini pakutanga akaiona ago, isu tose mhere. Upenyu chipo chakanaka, uye Zvinovhundutsa kutarisa kuti upenyu kusiya muviri munhu wacho - kunyanya kana atora nedzimwe varume. ndaifunga, "Zvirokwazvo vanhu havagoni munataisireva kuti. Zvichida ravachanoita kupindura kuti zviito zvavo muedzo. "
Ndakafunga zvakaipa. Uye kuti anorwadziwa.
Ndiri vachikuvadza nekuti zvine njodzi kuti munhu mutema mu America. Ndinoziva kuti mashoko chete kunogumbura vamwe vanhu, asi zviri tisingazvinyeperi vechokwadi.
Ndiri vachikuvadza nokuti nzanga matema vari kuvakuvadza, achikamhina pamwe nemhaka nyaya zhinji kunzwisisa.
Ndiri vachikuvadza nokuda vatorwa run-vazukuru wandakamboda pamwe cops kare.
Ndiri vachikuvadza nokuti mumwe nomumwe mutema Ndinoziva akava akafanana run-vazukuru.
Ndiri vachikuvadza nokuti cops zvakaipa kuti vanetseke zvakanaka cops kuita basa rinokosha vangobvumira makadanirwa.
Ndiri vachikuvadza zvimwechete baba vangu vaiva neni nokuti handina kudzidzisa mwanakomana wangu kudzidzisa: "Vanhu vachafunga uri kutyisidzirwa vasati chavanoziva pamusoro pako, saka unofanira kungwarira pane shamwari dzako chena kuita. "
Ndiri vachikuvadza nokuti vamwe vanhu havana hanya. Havanzwi zviri nani kukunda nharo pane kurwadziwa nevaya akakurwadzisa.
Ndiri vachikuvadza nokuti masimba vanosanganawo chivi uye mukuputsika kuti atambudze vamwe vedu. Kana vaya vakadanwa kuti mapurisa zvakaipa vane mhosva naro pachavo, apo tinoita kutendeukira? Ndinofara nekuti ndine mumwe mukuru kuti vadzokere kuna, uye ndine tariro nokuti Mwari achaunza kururamisira pakupedzisira. Asi hazvirevi Handisi chinombovanetsa.
Ndiri vachikuvadza nokuti njodzi kuti vawane nhau havasi chete nenjodzi. Kune zvakawanda.
Shamwari dzangu kuti havanzwisisi, ndapota tora nguva kuteerera uye tsitsi. Kuva "kukurumidza kunzwa uye unononoka kutaura" ari chiratidzo chokuzvininipisa uye kukura. Usati kuramba, tora kanguva kunzwa avo vanenge vachikuvadza.
Saka vazhinji vedu tiri vachikuvadza nokuti tinofunga kuti isu, “ini ndava yaigona kunge.”
*Verenga Lyrics kuti rwiyo pano
Joshua • Zvita 3, 2014 pa 11:30 pm • pindura
akauronzesa fam. Ndinonzwa kurwadziwa kwako
Cisco • Zvita 3, 2014 pa 11:30 pm • pindura
Coulda ini ndanga !!
Jeremiah • Zvita 3, 2014 pa 11:32 pm • pindura
Ndave rine pfungwa chete, uye kunyange zvakawanda pamusoro sei upenyu zvinogona kubviswa uye kuti munhu afe asingazivi Mwari. It kundityisa chaizvo uye kunokuvadza iniwo <3
Shana • Zvita 3, 2014 pa 11:37 pm • pindura
Hongu Ishe, zvakanaka
Marco • Zvita 3, 2014 pa 11:38 pm • pindura
Chinombovanetsa nemi, Ini dont kunzwisisa mamiriro ezvinhu 100% hapana nzira ndaikwanisa. Handinzwisisi kunzwisisa Jesu uye tinofanira kurarama kufanana. kufamba, kuparapatika, kukuvadza uye muchirwira pamwe.
Sam • Zvita 3, 2014 pa 11:40 pm • pindura
Ndinokutendai kugoverana mwoyo wako, uye kushandisa chipo chako kuisa kuti mumhanzi. It sickens uye zvinosuruvarisa ini kwete chete kuti vanhu vari vakapondwa, asi kuti vakawanda (kusanganisira vanozviti maKristu akawanda) vanoramba ona kurwadziwa uye kusaruramisira.
“Ndiri vachikuvadza nokuti vamwe vanhu havana hanya. Vaizoshaya nani kuhwina nharo pane kurwadziwa nevaya kukuvara.”
saka, saka zvechokwadi, rwendo. :(
namata, kunyengetera hama dzangu & hanzvadzi.
MelissaMcKim • Zvita 3, 2014 pa 11:40 pm • pindura
Ndinoda kutenga rwiyo urwu!
Iwe akataura chii mwoyo dzakawanda vanofunga
Izvi kuzoshumirwa kwandiri
Ndinokutendai kushandisa chipo chako uye kuudzawo nayo nesu zvose
Kirk • Zvita 3, 2014 pa 11:45 pm • pindura
ndiri munhu Native American kubva calera, Oklahoma. Ndiri Choctaw Indian uye pashure kunzwa pamusoro Ferguson vakaroorana masvondo apfuura uye ndaigona kunzwisisa ruvengo kurwadziwa chikonzero zvakaoma kuva zvakasiyana munhangemutange zera yanhasi kwete Vanova vanovenga ose ruvara rweganda ivo vari rusununguko rwedu kusimudzira Mwari uye hatizowani mabasa edu mhaka kuti kana zviri kuipa asi ndinonamata kuti ino nani asi ini ndichiyeuka Mwari ane zano zvose kana zviri zvakaipa kana zvakanaka isu chete tinoda kutenda uye kuti chimwe chinhu hatina zvakare isu kuvimba yakawandisa uri hurumende pane akazendamira kuna Mwari !
Tyler • Zvita 3, 2014 pa 11:47 pm • pindura
Vanokudai mukoma. Kuramba kurwa kwakanaka. Kukunyengetererai.
Jodhani • Zvita 3, 2014 pa 11:48 pm • pindura
An rwiyo zvinoshamisa. Zvinodiwa kuti vechiduku vanzwe uye vadzidze kubva. Ramba wakadaro rwendo
Joel Benjamin Neve Islander • Zvita 3, 2014 pa 11:52 pm • pindura
Ini ndiri muno mu Uganda asi mwoyo wangu rinorema uyewo. saka rinorema. Eric Garner, Repair Rice, Mike Brown. saka rinorema.
DustinSimmons • Zvita 3, 2014 pa 11:56 pm • pindura
Nice mutero vaimiririra upenyu matema kuti zvinokosha uye haangazvidembi kurerutswa pamberi nyika. A hurongwa kuti ratiri ukasavimba patakashanyira pfupi Pasi akatipa vakundikana, kakawanda, zvokusvika tinova afraid vaya vatinoda uye mumwe. Ndinovimba tinogona zvose nameso edu pamusoro paJehovha uye kukura vanhu pedyo somunhu, vanhu vaMwari. Garai simba mukutenda uye zvakaoma, GAWVI uye Trip Lee! Nyasha norugare!
Neal_Spencer • Zvita 3, 2014 pa 11:56 pm • pindura
Ini chete ndaida kutumira shoko iwe. murume, Kare vaviri vhiki zvave chakaoma neniwo ichatungira. Ndiri mupurisa uye rave chaizvoizvo oma kuona vamwe vangu kufarira vanhu (rap, vaimbi, shamwari, etc.) kutaura mapurisa nzira zvavanazvo. Pakutanga ndakanga ndakatsamwa, zvikundikane, uye akagadzirira nharo zvenyika sei havana kunzwisisa sei oma basa redu iri, nezvokuti kutyisa kwazvinoita dzimwe nguva… Ndinofunga aigara ari sefuro, nokuti zvakawanda Ndakaverenga pamusoro nyaya, kuwedzera Ndakataura neshamwari dzangu, verenga y'all kuti statuses sei zvawakadzidziswa amira zvakawanda nokuda cops, akanga motokari yako bata zvakawanda, saka musi nezvakadaro… Ini chete ndakazviwana kuwana here mwoyo pamusoro penyaya rose.
Ndine sezvandaida kwekumira motokari. I kuvamisa kwakavakirwa zvinhu chaiwo chaizvo 80% nguva (mweya kunyoresa, inishuwarenzi, etc.) nekuti ndicho yangu “colorblind” nzira nevanhu. Zvino mumwe 20% nguva iri kana motokari anoita chinhu zvikuru nechokwadi uye kuoneka kuti ndinoda kutenda munhu pasina Kurovedza mupurisa wacho vaizofunga akanga shamisa kana tasked pamwe chete basa ndakanga. The Pfungwa Ndiri kuedza kuita ndechokuti Ndinoedza nepandinogona napo kuramba asingasaruri, saka kuti handisi kudhonza motokari pamusoro nokuti anotarisa “sketchy” kana nekuti munhu achidzinga inoratidza “sezvinoita thug”. The ndechokuti, Ndiri runako kufara sei ndakanga ndichiita basa rangu, vachirumbidza Mwari pamusoro kuti. Ndinofunga apo ndiri mwoyo kunyange, ndiko kuti ndinonzwa diki saka mune BIG nyaya iyi. The zvakawanda I nharo, zvikuru ini akateerera wangu Black uye Arab shamwari kundiudza nyaya dzavo sketchy anotsvaka uye fungidzira zvinokonzera nezvimwewo. ndipo Ndakazoona ndakanga ndisingazivi sei kubatsira dambudziko iri.
Ndinoziva ndinofanira kunyengetera, uye ndave nekuti ndinoziva mijenya pamusoro cops zvakanaka kubva ipapo vanoedza nepavanogona napo uye vanoda basa iri zvose zvakarurama zvikonzero… Asi ndinofunga kuzvikudza dzevanhu kwandiri anoda kukwanisa kugadzirisa dambudziko iri uye kwete kumira simbe apo nyaya iyi mberi mhiri America. Rinongova murume zvakaoma… saka, Ndinofungidzira chinangwa katsamba iri kutaura, Ndinonzwa renyu marwadzo tungira. Ndinonzwa marwadzo akawanda shamwari dzangu avo zvaiswa pasi sketchy basa mapurisa. Uye nokuda zvazvinoreva / anoita nokuda, Ndinoda ruregerero chero zvakanaka mamiriro ezvinhu waita yaiswa kuburikidza nomumwe wedu. Uye chikamu katsamba ichi chechipiri kunongova munyengetero chikumbiro, kuchengeta musoro wangu uye kuwana nzira kunatsiridza vemunharaunda yangu, nzvimbo yangu basa wose. It anowana mwoyo paunoona dambudziko uye hauzivi sei kuchigadzira.
Quick okupedzisira nguva, Ndinoda rwiyo murume. It wakandiisa misodzi mundima rechina apo iwe ndokudanidzira kuna zvakanaka cops. Ndinotenda kuti murume!
With rudo zvikuru uye ruremekedzo,
Danielle • Zvita 4, 2014 pa 11:59 ndiri • pindura
Izvi zvakabaya mwoyo wangu. Ndinokutendai nokuti yakajeka nokutendeseka. I vanokukwazisai nokuti Mwari aitya murume rudo uyo akasarudza kukudza mhiko kuchengetedza uye kushumira. ndinonyengetera ungadai kuva chiedza mumhanyi mubasa rako uye kuti yenyu kuzvininipisa Kukudzwa nyasha zvaingoramba vamwe vakuru Police kuti vane mukana kuudzawo mashoko akanaka navo. Kuti kubudikidza iwe zvikuru kuchinja mudzidzi uye utungamiri zvicharamba. Mwari ngaakomborere maoko enyu netsoka uye muromo kugovana chokwadi ichi mazuva ose oupenyu hwako. Zvino imi munoziva basa renyu! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • Kubvumbi 8, 2015 pa 10:41 ndiri • pindura
Wow! rwiyo zviri kuzviremekedza yakanga yakadzika uye chaizvo pamwoyo asi kuti katsamba zvechokwadi yarova nzvimbo. Mavhiki mashomanana shure ndakanga ndava gasi pane ezvinhu pombi kuti basa rangu anoda isu kuti gasi panguva uye ndinoda kuona sheriffs kuwana gasi pamwe uye mumwe nomumwe ndingadai kuona ndinoda zvakakwana kuoma kumusoro kwete kunze kutya munhu kunyange nekuti I havana kuziva kuti kuvhunduswa navo asi akanga akarurama kuva ichi dzamira kunzwa, nekuti achikura ari 90 kuti kuva mupurisa Ndairemekedza kwavari semagamba uye kubva zvakaitika zvakafanana rwendo yagadzana uye vose misoro iri rwiyo rwangu kutarisana navo vari magamba vave zvachose achinja. Kwete zvakaipa nenzira zvazvo nekuti ini chete kungoita kuvaona sezvo zvavari zvechokwadi vari pakupera kwezuva.. Munhu.. Uye ndinotenda Mwari kuti akandibvumira kuti kuvaona sezvo nokuti iwe havawanzosarudzi kuona (zvakanaka Handina nokusingaperi kuzviona elnaz) zvavo mumabhuku enyambo kunyengeterera magamba. Uye ndizvo zvakanga birthed kunze vaya zviitiko… Nekuti mukati makakatanwa rangu uye kutya kwavo kuva zuva zvakaipa kana kunyange kutya kwavo maonero angu munhu pane ezvinhu gasi pombi ane hoody (kunyange zviri Nechando), kuisa gasi munzvimbo dzisina kunyorwa zita zvose chena motokari (usingazivi kuti ini kupa zvokufambisa vanhu vakaremara rezvedzidzo kushanda),akauya tsitsi ichi kunzwa chakaipa nokuti vave kutya kwangu ari kuti mumwe munhu kuti kupomera nhema uye / kana kuvamutsira kuita kunze izwi kutya upenyu hwavo uye mukurumbira. Its chete jacked kumusoro ezvinhu zviri pachena nzira muvengi kuzopesanisa uye kuti tirambe vakaparadzana saka muviri waKristu haangavi pamusoro umwe Nokuti anoziva anogona kutora nzvimbo apo kuti zvakadaro. Asi muduku chaanogamuchira kuziva kuti kana anoita kuti anosika 23 egore munhurume munamato varwi vaya vanoomerera hapana kana chimwe chinhu kunze kwaShe Jesu Kristu ari izvi okupedzisira uye zvakaipa Mazuva. Neal Ndinovimba uye munyengetere kuti iwe chete kuramba vachizvininipisa uye kuti ose ezvinhu unogona kupinda pasinei muchadenga Rinodzika nyasha dzenyu semwana theMmost soro. acharopafadzwa!
Kevin • Zvita 3, 2014 pa 11:59 pm • pindura
Hey rwendo.. hazvina kubva zvakava iwe kukonzera kuti Mwari akasimuka rwake pamusoro pako. I belive kuti zvose zvinoitika nokuda kwechikonzero. Ichi mukana wako kubatanidza vanhu vakawanda ipapo uchava nokusingaperi kufungidzira. vanhu vari kutsvaka mhinduro ivo chete vanofanira ivo mukomana kuuya pamwe uye spred vhangeri kuburikidza mumhanzi, Bhaibheri kana chete kugara pasi uye ndine mwoyo kuti mwoyo pamusoro kofi. Ndinofunga zvandiri kuedza kutaura sezvo Andy Mineo akaisa “We livin munyika ine rima sei gonna kuziva kana tisinganeti kuisa kubwinya kwake vanoonekwa kuti ngazviitwe kuratidza ngakuve chiedza”.
izvi • Zvita 4, 2014 pa 12:03 ndiri • pindura
Tinotenda zvose mimhanzi yako. Iwe rose 116 watinya. Mwari zvechokwadi kushandisa imi vakomana kutaura neni uye vamwe vechiduku, asi kune zvizvarwa zvichauya! Ndinovimba kuti nerimwe zuva, Mwari unoda, buda kukubatsira vari avo ine misha iwe chinorondedzerwa muna rimwe kubvunzurudzwa dzenyu.
Quentin Holland • Zvita 4, 2014 pa 12:04 ndiri • pindura
rwiyo simba…. mwoyo wangu rinorema izvozvi ari baba 3 vaduku vanhurume African American. Vanoona kuti vane mukana wokuva purezidhendi weUnited States asi vanozivawo vangasazorarama kuti zvadai…
Zvakangonaka kurwadzisa. Nyika izere tsvina….
mvura (mweya) uye Mwanakomana (Jesu) anogona kubvumira chinhu chakanaka kukura….. Tariro yangu iri maari
Tjay • Zvita 4, 2014 pa 12:14 ndiri • pindura
Maoko pasi patepi. Mukaseti ino zvakajeka abata mhiri. Zvinhu zviri pasina mubvunzo kusuruvara uye mwoyo wangu rinorema. Ndiri chena mukono asi akakura kunhivi vanhu ruvara. Kunyange pedyo mhuri ane ruvara. Ndakakurira rimwe makasimba munharaunda iri Providence, Anul raMwari repasi rwezasi uye ndiri anonyatsoziva kusaruramisira zvichiitika munyika. To “kuchengetedza uye kushumira” zvinofanira kuva pamusoro ose vakuru tifunge kana girini, bhuruu, vatema kana chena. History chete anodzokorora pacharo kana vanhu havana kuchinja… Ndinovimba izvi anosvika kumagumo uye zvose izvi vanhu kuti vakakuvadzwa pakuitika angawana runyararo. #AllLivesMatter
Ken • Zvita 4, 2014 pa 12:25 ndiri • pindura
Murefu a BRO yangu, jus readin yenyu romukova vaiva neni misodzi. Ima 25 egore Mexican uye murume mwoyo wangu saka burddened kubva kuti Mike Brown kufona, dzangu Popz ane COP kuona zvinhu zvakadai kunoita neni kunetseka asi ndinoziva uyo anofukidza isu. Zvino achiona izvi nhasi I jus cryd BRO uye kunyengetera kuti mushandi akamutswa kukohwa. Ndicho redu chizvarwa BRO letz rambai kudzvanya maari! Rudo a BRO
meldd • Zvita 4, 2014 pa 12:33 ndiri • pindura
kukura, Handina kumboona chinhu kuitika kuti aizoita kuti ndifunge kuti rusaruraganda achiri kumativi. Ndaifarira vanhu vose uye muguta rangu rose ainzwa chete (kana saka ndakafunga).
ikozvino, Ndinoona zvose izvi matambudziko&nokutsamwa. Handisi kuziva vanhu kumativi kundiremekedza. Sei izvi zvose zvaitika? Ndaifunga takanga yapfuura iyi..
Lena • Zvita 4, 2014 pa 12:36 ndiri • pindura
simba: lyrically uye musically. Handisi kuenda Labels, tiri vatadzi uye vakasasvika pfupi yekubwinya kwake. Asi ini ndiri musikana chena. Zvakawanda ndingada sezvo vanofunga ruvara hakusi kukosha-zviri munzvimbo munyika ino uye nyika. Somutadzi: izvozvo coulda ini ndanga. Paaiva musikana murombo chena: pamwe, asi zvimwe kwete. Uye kuti ane utsinye uye akasuruvara.
Ndinoda kuti rwiyo urwu yaguma: Tariro yangu iri maari. Peace uye kugamuchirwa kunouya apo tariro yedu, kutenda, uye rudo maari.
Miguelperez • Zvita 4, 2014 pa 12:55 ndiri • pindura
Ichi chinhu chakanaka zvakadaro iwe akanyora uye saka chokwadi uye Ndinofara kuti iwe akapindura zvakanga kuremera mwoyo wako pamusoro nyaya idzi uye zviri akasvinudza meso angu zvakawanda kuti nyaya chisimba kuti vakombe U.S. izvo kuda kufuratira kana kusakoshesa sezvo anokosha nhau. Mutende iwe okugumburisa Lee.
Damian • Zvita 4, 2014 pa 1:01 ndiri • pindura
Mac • Zvita 4, 2014 pa 2:13 ndiri • pindura
murume, Ndakaverenga mazwi enyu manheru. Ivo andirova zvakaoma. kutenderera ichi chinorura nyika ino iri…jaded cops kukanganiswa majaya nhema nokuti aenderane mumwe Profile…majaya rutema kuwana vaneta kuitirwa uye akamira uye kutaura nokuda pachavo…
munoona, yedu hunhu kunounza pfungwa compartmentalize zviitiko zvedu. Mumwe akarumwa ne sezvo imbwa sezvo mwana, Kazhinji anokura vaine mukupandukira canines zvose…kana sezvo kutya kana ruvengo. Izvozvo zvinogona kuva zvakaoma kukunda, nekuti tikabvumira manzwiro iwayo…dzimwe nguva kusimudzira navo uye zvokudya navo kuduku rationalizations.
Tripp, Ndiri chena. Kusvikira yangu 4th gore giredhi, Ndakakurira mumwe duku zvishomanana vana chena munzvimbo vakawanda rutema kumaodzanyemba Illinois. Shamwari dzangu dzose dzaiva nhema. Zvadaro, takatamira Tennessee. Ndaibatanidzwawo akatumira kuhofisi wechikoro wacho katatu pagore kuti kurwa nemunhu Akadonhedza “N-shoko”…IN THE 4th giredhi…Vana akanga akadzidziswa patsanura uye kutarisira vamwe pasi….nokuti ganda ruvara. Shoko chakatsamwisa ini…zvokusvika I vaitirova nezvibhakera newe muromo vachiti izvozvo. It achiri kutsamwa kunobva kwaita ini…Ndinongoti pachinzvimbo punchi ikozvino.
murume, Ndine hama dzose ruvara uye mumvuri ganda….uye, munoziva? NDIRI kudada IT. muti mhuri yangu ndizvo chaizvo zvinoita America mukuru. mhuri yangu ndiyo American utsotso poto. mhuri yangu zvinoshamisa uye ndinovada vose.
A nomudzimai apfuura, Ndakaenda kuburikidza kutaurirwa kurambana uye kuburikidza angu utununu, dzakaguma garei vakapfigirwa uye ikozvino vane felony chinyorwa. Ndakaona vomuzana ruoko migumisiro cops zvakaipa. ikozvino, chero nguva imwe patrol motokari anowana shure kwangu kana COP anofamba apfuura ini, Ndiri kufunga, “Ndezvipi gonna kuita nguva ino? Ndezvipi gonna ndikadzura kuvapa chikonzero akakuitira ini. Nekuti kamwe vanoziva uri hurongwa…uri tsotsi kuti upenyu.” Zvino ndine kutendeuka kuti yokuva yakamanikana dzakanaka uye bigoted. Vanoti chimwe apuro zvakaipa hunoparadza kuti neboka, asi Mwari haana kutiita nomufananidzo maapuro…Akatiita nomufananidzo Wake. Kuti Hunofanira kuverenga chinhu, rudyi?
chokwadi, BRO…pashure pokuverenga mashoko ako uye nokuafungisisa uye akatarira shure muupenyu hwangu….aigona kwandiri kunge, wo.
Handitauri kuti kurerutsa kana kuti kubvisa kukomba mashoko ako. Zviri hazviwanzodaro. Pane dambudziko, asi nhema uye chena nyaya haisi dema & chena nyaya. munhu wese vakasiyana uye anoita pachavo upenyu zvakaitika kuti natsiridza pachavo manzwisisire avo nyika ino rawa tiri kurarama. Dambudziko iri chivi. Tose nemhosva payo. Ndinotenda Mwari pane varume ikoko izvozvi kuti unoteerera Shoko raKe uye vari kuedza kubatsira kuporesa. Ndine iwe nevamwe vakawanda muminyengetero yangu usiku huno. Rudo ruzhinji.
Mac • Zvita 4, 2014 pa 2:17 ndiri • pindura
“Asi uchenjeri hunobva kumusoro pakutanga hwakachena, uyewo hune rugare, pfava, yakazaruka kufunga, huzere nengoni nezvibereko zvakanaka, asingasaruri uye vepachokwadi. Uye kukohwa chekururama chinodzwarwa murugare kune vanoita rugare.”
Jamie • Zvita 4, 2014 pa 4:18 ndiri • pindura
Ndiri diggin nayo. Totally chitarira chauri vachibva Tripp.
Stephlandry09 • Zvita 4, 2014 pa 6:42 ndiri • pindura
Kunyange zvazvo ini handigoni kunzwisisa izvi zvose kubvira ndiri mukadzi wechidiki chena, ichi vakauya misodzi mumaziso angu. Mwoyo wangu rwavatambudza kuburikidza kunze Ferguson rose nomuedzo. Tinotenda kuti kutaura pamusoro ichi uye kuudzawo dzenyu nazvo.
AaronCrim • Zvita 4, 2014 pa 7:23 ndiri • pindura
Mazvita Trip, Ndakaona izvi zvinobatsira. Ini pachangu ndiri muKristu chena kubva WV, Ndakagara akatamburira chii kuti zviitiko izvi. Kwete chaizvoizvo chokwadi chii kufunga, (sezvo ivo chaizvoizvo vasina kukanganiswa ini zvakananga) Ini Zvisinei ndanga saka kugumbuka kuona vakawanda hama dzangu nehanzvadzi chinombovanetsa ndokuparadzanisa. Kugumbuka kuona vakawanda dzevekwangu kumurwadzisa. Thanks zvakare kunyange pakudzvinyirirwa ichi akandibatsira kunzwisisa zvishoma uye zvichatibatsira kuti ndizive nzira nani kunyengeterera kubatana uye runyararo. Mwari komborera
Jeanine Pinkney • Zvita 4, 2014 pa 7:29 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda rwiyo urwu. mukoma wangu akandituma kubatana uye wokwaEfremu zvechokwadi chaizvo ichi mangwanani chikomborero ichi. Ini kuti ndiri munhu akuvara, Ndakarasikirwa mwanakomana wangu Rashad Pinkney December 21,2013. Nemapenzi pfuti mhirizhonga. Zvinonyadza sei isu anotora hwedu. Black on Black mhosva ndizvo zvinoitika nzira youpenyu munharaunda yedu. Saka vazhinji vedu majaya vane nguva ukoshi upenyu. I kukuvara nguva dzose nokuti mufaro wangu yatorwa, I kurwadziwa nekuti hapana kuzvidavirira, Ini kurwadziwa nekuti handina kunzwisisa, I chete kukuvara!!! Asi ndichiri kurarama uye kuda Mwari wangu!!!
TerryMiller • Zvita 4, 2014 pa 7:40 ndiri • pindura
Unoziva, rwendo, Ini handigoni kutaura chinhu nzira imwe kana mumwe pamusoro yose kudzika nyaya. Ndiri munhu chena. Handioni rusaruraganda sezvo munhu mutema anoita. Handina akararama kuburikidza nawo. asi, chii chandinoziva ndechokuti, rwiyo urwu ndiyo nokurova. Anokwanisa kuva nokurova guru, Ndofunga, kana kusimudzirwa kuburikidza zvakakodzera migero. zvakadaro hazvo, ya'll sokuti wakanaka panyaya iyoyo, saka chete kutora kuzadzikisa, dude. Aihwa, Handifungi munhu anofanira racho chinosuruvarisa ezvinhu. asi, kana uchitenda kuti chii waita wakaziva uye ndaona, kumhanya zvino naro. Ndiyo upenyu chaihwo zvinhu chauri kutaura pano. Mose Ndizadzise vemifananidzo vanofanira kukusunungurirai seboka Album kana muunganidzwa. Pamwe kunyange e.p. Uyai ruzivo pundutso pasina zvose negativity kuti rokunyika Artists akutungamirirei tafura. zvakadaro hazvo, basa guru pano!
Henry Strozier • Zvita 4, 2014 pa 8:00 ndiri • pindura
rwiyo Great! Thanks yokuitawo mwoyo yenyu nesu! Izvi zvinosuruvarisa zvakadaro! Ndinonamatira kuti mhuri yevanhu vakaurayiwa!
Louis • Zvita 4, 2014 pa 8:04 ndiri • pindura
Thanks Trip, ichi zvakanaka mweya wangu.
Alasdair • Zvita 4, 2014 pa 8:15 ndiri • pindura
Tinotenda kuti drivel Trip Farrakhan.
Jacqueline Lugo • Zvita 4, 2014 pa 8:42 ndiri • pindura
mwoyo wangu Anoparadza nokuti nzira ino. kusaruramisira yakawandisa! moyo wangu rinorema. Ndakamirira pazuva kana Ishe anouya vanoti vanhu vake. Apo pachava pasisina marwadzo. Hapasisina wokuurayira. Hapasisina misodzi. mwoyo wangu anoenda kunze mhuri imwe neimwe kuti varasikirwa nomudiwa mu izvi zvinosuwisa uye chisimba nzira. Mutende iwe rwendo mashoko ako uye mwoyo wako
Alasdair • Zvita 4, 2014 pa 8:43 ndiri • pindura
Dillon Taylor vapfurwa Salt Lake City. No chombo. No mhosva. Musaziva rudzi pimp.
chuni • Zvita 4, 2014 pa 8:43 ndiri • pindura
Thanks nokutora nguva kunyora nezvazvo. Chinhu maonero Handisi kunzwa kakawanda uye chaizvoizvo ndisina kufunga kusvikira yapfuura.
Mike • Zvita 4, 2014 pa 9:35 ndiri • pindura
@alasdair pfungwa ari kuita, izvo uri kuedza kuridza kure sezvaakareva ari rwiyo, ari kuti mapurisa chena vane uye kuita kuti zvekungofungira varume matema kuti havana chikonzero. Kuva chena uye kugara rumwe rutivi mhuri yangu ndicho rusaruro, uye rimwe divi kuti ubatanidzwewo African American, Ndinogona kukutaurirai kuti chii Trip vakati ichokwadi. Kana ari Dillon Taylor, izvo ndine kubvuma ndomumwe shoma nguva ndanzwa chinhu chakadai yokuvamba, kunge zvimwe chete. Trip ari kutaura kuti kune vachiri nyaya ine rusaruraganda uye rusaruro munyika ino, uye nokuda kutadza. Kuti dambudziko hazvirevi chete kuenda imwe nzira, asi rwiyo urwu pamusoro yayo ari kutaura pamusoro kudiwa nyaya hwaswedera izvozvi, ndiro denda pakati majaya vatema vari kubatwa zvisina kukodzera nokuda ikodzere mumwe kufanana nevechiduku. Muchatenda zvaunoda, asi tinoona nyaya, uye tichamira naro, uye kurwadzisa nevaya kurwadzisa.
Henock Aristide • Zvita 4, 2014 pa 9:49 ndiri • pindura
Zvikuru kusuruvara pane chii chirikuitika. Nice njanji Tripp.
@TheRealChrisZ • Zvita 4, 2014 pa 9:55 ndiri • pindura
Kunyengeterera kuporeswa uye kuyananiswa Jesu chete anogona kuunza!
zembera • Zvita 4, 2014 pa 10:30 ndiri • pindura
Ndinofunga zvayo kunaka uye ngozi ari chena hadzi uye kwete munhu mutema. Handisi musaruraganda asi vazhinji mhosva kuti vakanga commited vakandidarikira, mhuri yangu, uye neshamwari dzangu, dzakanga vanhurume vatema. Ndinoshuva nayo wasnt chokwadi asi.
Thebiggerpicture • Zvita 4, 2014 pa 10:49 ndiri • pindura
Sei akanga tichidzivisa nokusungwa? Haafaniri kufa, asi haafaniri kunge tichidzivisa vakuru kana. Aihwa, hazvaikwanisa kunge iwe kana uri kuteerera mutemo. Ndezvipi vakuru vanofanira kuita zvakasiyana? Rega vanhu kutyora mutemo, kurwisa kusungwa uye famba zuva ravo? Rini kuchaguma? Wakamboona achangobva nhamba? Katatu MORE nevachena vanourayiwa BY nemapurisa PANE vechitema. KATATU. Regai kuti singi mu. Handifungi vatema vari kuitirwa. Ndinofunga rioting, zvaibiwa kwakaenderera uye nokupisa zvinhu pasi zvinoenda kuti vana chena musaruraganda (bc achizviona zvose paTV uye zvinoenda kufunga vatema zvose izvozvo) uye ndinofunga vana vatema vari kuenda kufunga kuti zvakangonaka kuita saizvozvo. Musapa mapurisa ane chikonzero “profile.” Regai kuita matema nharaunda kupfuura ngozi kumativi maguta ose. Munhu wose (mavara zvose) anofanira kurega kufunga vari pamusoro mutemo uye hapana chichaitika kana ivo kuiputsa. (rwiyo Good, Zvisinei… une unyanzvi)
Mike • Zvita 5, 2014 pa 9:08 ndiri • pindura
Ndapota kurangarira kuti kune zvinopfuura 3x sezvo kuvaRungu vakawanda varipo raizouya African kurarama munyika ino.
Izvi zvinopa Kuparara reshiyo kuurayiwa kwakavakirwa vangani rudzi nechimwe kurarama pano.
MichellH • Zvita 4, 2014 pa 10:53 ndiri • pindura
rwendo, iyi ndiyo nzira yokugadzirisa nyaya, kutaura, manzwiro, kuvhura uye PAKUNYENGETERA! kwete kuvenga…Ndatenda!
Ini ndiri akwegura mukadzi chena pakati. Ndine akasiyana chaizvo nemaonero. Ndainge kunetswa somunhu chena hadzi wechidiki (chenguva dzepabonde) , uye vakatambura rusarura mune dzimwe nzira. Somuenzaniso vari akapfuura akakwidzwa mabasa nokuti kufuta kunyange zvazvo ndakanga vanonyatsokwanisa. asi, Handina ngazvive vandibate pasi nokuti chete Ndine kufadza Mwari, uye ndizvo zvandiri kuedza kudzidzisa vaduku vana ndiri kumativi. Tiri zvose atarisana rusaruro, TOSE, mune dzimwe nzira kana mumwe. Asi chii majaya matema vanosangana anoisa pangozi hwavo, Ndinofunga kuti ndiyo pfungwa dzakawanda vari kuedza kuyambuka.
Twiceborn • Zvita 4, 2014 pa 10:54 ndiri • pindura
Maminitsi ndisati ndakaona Tweet yako I Posted on FB
“Dzimwe nguva ini Mupumburu TL yangu & muine kunyengetera.
Handisi mhosva yacho unchurched asi vamwe vaKristu saka Inconsiderately Nonempathic #ButGod”
Ndizvozvo Brother Trip.. Its kusuruvara uye ndiri shungu..
I dont kuda nharo kana nharo.. Ndiri chete ndichinamatira rugare uye kururamisira murume.. #CrazyWorld
JR • Zvita 4, 2014 pa 11:04 ndiri • pindura
rwendo, Ndine urombo saka nekuda kwako kurwadziwa pachako uyewo makuru marwadzo kuti yose African American / Black munharaunda inofanira kunzwa iri chiedza zvaisemesa mugumisiro zuro.
SomuKristu chena, Ini ndingadawo abatane newe chikumbiro kuna anoruramisira vashoma akadai pachenyu. Uyewo ndinoda kutaura kuti sezvo Ndakatarisa kuti vhidhiyo Eric Garner nokuurayiwa ago, nokuti chete kwemaminitsi iwayo mashoma, Ndaigona isa pachangu nomushangu dzake uye vanonzwa kusaruramisira.
SomuKristu uyo ​​akatambura munzvimbo kuwedzera kuvengana dzechitendero, Ndinofunga kuti zvinokosha kuti tose kunzwisisa kuti kana boka redu chavawo atambudzwe mutemo nemapurisa, tichaona tiri yakafanana basa, wo. Ndeupi mumwe chikonzero nei Tinofanira kushingairira kururamisira.
Tinofanira kushingairira kuti zvakaenzana nokubata nokusasarura vose – nokuti chiremerera hwevanhu. Tinofanira kubvuma Nezvagara Zviripo. Chokutanga hama dzedu nehanzvadzi dziri African American / Black vemunharaunda, asi nzanga yedu yose. Hatigoni kurarama munyika vanodzvinyirirwa. Dai tose zvidzidzo zvakawanda kubva nedambudziko Eric Garner kuti kuuraya. Ndatenda.
Ben • Zvita 4, 2014 pa 11:14 ndiri • pindura
Chinhu ndinoda kupfuura pamusoro rwiyo urwu ndechokuti simba ini kunzwa nyaya nenzira zvawo haana. Ndinokutendai zvikuru nokutendeseka achifumura chivi mumwoyo mangu uyewo rudzikinuro Muponesi mukuru.
Kunyengetera pamwe rwangu pamusoro muromo wangu.
Pamela • Zvita 4, 2014 pa 11:21 ndiri • pindura
Ndinokutendai nemashoko enyu, rwendo. Ndinoyemura iwe somurume, mugari, uye Chapupu. Mashoko ako nguva dzose akabata mweya wangu uye kuti ndifunge. Minyengetero kuna tose. Rudo ruzhinji.
RyanH • Zvita 4, 2014 pa 11:35 ndiri • pindura
Ko kufanana nevechiduku wechokwadi? Kwaizodirweizve imwe kufanana nevechiduku kana pakanga pasina kutsigira stereotyping? Tose tinoziva kuti acho akawanda Rap nziyo mazuva ano. kururamisa Its kubva mugehena, uye anoita nevaya kurarama kufanana kugehena. Kana ukaona tsika vanhu vachiteerera nziyo COP wokuurayira, nokushandisa zvinodhaka, umhondi, kuba, kuva chisimba, kumudhara, ayo nyore kunzwisisa kuti vave wakakwirira tsika kuita avo mhosva vari kuteerera. Pane Statistical uchapupu kutsigira kwakadaro? Ehe. Anogona wose kuparidza yokufeva maitiro kubva ichi dzaSatani Rap tsika paguta rimwe nerimwe? Ehe. Ko vanhu vakawanda iyi tsika dema? Ehe. Ndiko chikonzero kufanana nevechiduku…Vane chete vatema? Aihwa, asi ose ganda ruvara, asi predominately rutema. Saka kwayo nyaya dzetsika pano kwete rudzi nyaya, uye kuitira zvinoitika kuti tsika tiri kutaura zviri sezvikuru vatema. Unonyatsoda kutarisira vanhu kuti haana kufanana nevechiduku, kana chokwadi shoko iri kuti mune zvakawanda Muzviitiko (kwete kwete zvose) yakakodzera? Udza kuti kune zvomumvura muna Afghanistan vanoona chii sokunge chete mukomana uyo akauraya chipande yake yakanakisisa vhiki pamberi. Muchamuudzei kuti kurega stereotyping. Its kwete rusaruraganda, ayo ari muvengi waMwari wedu uyo ​​wakaputsanyiwa bongozozo pachizvarwa ichi vechitema kuburikidza hudyu-hop uye vezvenhau. RWIRA BACK vatsvene.
Thebiggerpicture • Zvita 4, 2014 pa 1:01 pm • pindura
Ndizvo Ndinoramba ndichiti zvakare! Usaita ngakuve redhiyo-mhando pakutanga. Unovaona ikoko chikonzero!
RyanH • Zvita 4, 2014 pa 5:45 pm • pindura
Tinofanira kubvuma kuti pane dambudziko pano. Tinofanira kubvuma kuti ichi hudyu-hop tsika (kana ini ndikati kuti, Ndinoreva rokunyika Rap kuti zvose pamusoro pekurarama kuzvidzwa) akaita yakaparadza vemunharaunda yedu. Tinofanira kurega vaipomera “rusaruraganda” sezvo mhaka izvi zvinosuwisa incidences. Chokwadi ndechokuti chikamu chikuru dema vomunharaunda kwave kufurirwa zvakaipa nemimhanzi. kwete chete munharaunda yayo nhema, yayo yose nyika, asi nekuti akawanda rappers izvi nhema, vatema kuona nyore pachavo navo.
SevaKristu tinofanira kuva ndivo kufurira nyika yakatipoteredza, nokuda kwenyika. Nyika inofanira kuona tariro yekubwinya matiri. Iyi ndiyo chete nzira tichaita kuti asiyanise ino neanozununguswa wakaipa.
Zvokushandisa kwamuri rwendo Lee nokuda kufurira dema munharaunda uye nevamwe vakawanda nenzira kuupenyu wechokwadi. Ngatisamborega rudo urwu nokuti nyika kuti runotigombedzera kuti upenyu hwedu nokuda kwavo.
Just mumwe musikana chena • Zvita 4, 2014 pa 11:47 ndiri • pindura
Beautiful manzwiro, runako…Ndinoifarira! Paridza uye yeuka rusununguko kutaura uye vakadaro, rudo anorova zvenyu, rudo zvose 116 baya mumhanzi, kunzwa marwadzo nokuda ya'll, Hongu ndinoita. Kumboita upenyu sewe, nokuva urombo into, tichitambudzwa somunhu hongu wechiKristu, zvakaparadzaniswa ari mupfumi chikoro hongu, akarwisa ari chena imwe munharaunda yose dema N kubirwa ane monica pfuti hongu, akarwisa pamusoro mabhazi muguta vechitema hongu, kuona PTSD pachisimba ichi hongu, udhakwa akatora pauduku hwangu, kushungurudzwa akatora yangu nemhosva uye smokin sora nevabereki vangu yakanga nguva yedu yakamboita hongu, kudzivirira yangu naamai-kudanwa 911! Moms mhino akaputsa, Baba kupfeka kachidza, shanu Yr yekare musikana nokupopota MIRA! Blood yose, Madhimoni paivhu, Ndiri musikana guru ikozvino. ini kudzura, hongu Akaita! Kubva ndove uye mumatope! Kubva bonde, zvinodhaka, rufu, unyengedzi, kutadza, Iye akandiponesa, nokuti chinhu nani. Tose kunzwa marwadzo, ngationei murwire imwe Thắng! Tose tine uchapupu, kana zviri rascism kutsvinya sexism(crae),kudhakwa, kujairira, dambudziko, yaizoitika kuzvipokanidza, asi kuparidza CHOKWADI uye RUDO hama Kristu! Chii chatingaita? Ita zvaunofanira kuita! Vanondida ndinokudai! Both nzira, VaKristu kusimuka! Rudo rudo rudo Jehovha!
EnlightenedOne • Zvita 4, 2014 pa 11:50 ndiri • pindura
rudo sei chaiye uyu
bhiri • Zvita 4, 2014 pa 12:08 pm • pindura
Trip mukoma, Ndakasangana iwe pane Cedarville vakaroorana masvondo apfuura, uye nguva dzose aida uye akatsigira mumhanzi yako. Muhurukuro yako achiparidza kukuru! Asi ndinovimba uchava funga mhiri mari. Kana muchiti 'It coulda here'…unofanira kunzwisisa zviri saizvozvo kuti aigona kunge ini, uye ndiri mutana chena murume muparidzi. Kufamba pasi mumigwagwa mumaguta makuru kana nemisha dzokumaruwa, isu tose tinogona kuva vanoitirwa rusaruro uye noruvengo…nokungoti ruvara rweganda redu…zvisinei hunhu hwedu kana zvatiri kuita panguva. Ndicho chinhu nerima yechokwadi kuwa uye chivi.
Asi Ukuwo….izvozvo 'handizvo’ kunge iwe uyo akasungwa uye vakaurayiwa mumigwagwa ', kunge nekuti ungadai vakabvuma kumupurisa muKristu, uye somunhu anoremekedza uye anoteerera pamasimba Mwari wakaraira, sezvakaitwa nomuapostora Pauro. Kana Paunoongorora ezvinhu nomumwe wevarume ava iwe kutaurwa, zviri pachena kuti vakaita sarudzo kudzivisa, tyora, kurwa kana urwise Leo akanga achiita basa ravo kuti zvavari kupomerwa kuita nokutendeka. Zvino mukuru anogona kunge mhosva kutsvetera, rusaruro kana ruvengo, kana munhu wacho akanga pamwe mutemo, vangadai vachiri vapenyu uye vachikwanisa kutevera chero kusaruramisira navo mudare. Tose tiri pasi kusaruramisira….uye tingaita sei izvozvo….kazhinji anosarudza magumisiro….sezvayakaita nechimwe izvi zvinosuwisa zviitiko.
Ndinokutendai nokuti kufunga ichi, uye ndapota inzwa wakasununguka ndirangei kana ndine Zvakaipa, kana kana zano rangu unbiblical kana zvinopesana nedzidziso Jesu pachake. Mwari vakuropafadzei hama yangu, uye ngati vashande pamwe achaporesa….kwete unogovera.
Stephanie • Zvita 4, 2014 pa 1:30 pm • pindura
Upenyu hunokosha zvakadaro. It ini haafari kuona sei upenyu vanhu vemunharaunda yedu haina rakaitirwa chete panyaya sezvo vemamwe marudzi. Hapana anofanira gunned pasi kana ndokuvhungwa kurufu. Rest vimbisa vaya vanofunga ichi unhu kuchaita kufuratirwa naMwari muri akarasika. Kana murume haringamiri nokuti zvakarurama achafanira kupindura kune Wokumusorosoro. Trip Lee….marwadzo ako / marwadzo edu chaiwo pasina mubvunzo. Uye Ishe tinzwe uye kuita zvinoenderana. Tinotofanira kumira takasimba maari, uye teererai kuita zvaanotaura. Ndinonamata kuti sezvo vanhu isu vachauya pamwechete naJesu Name muuchenjeri, simba uye simba kuti akanaka chinja.
Jacob • Zvita 4, 2014 pa 2:01 pm • pindura
Wakambotaurirwa unotikurudzira kwandiri kubva ndinofanira kutanga vakateerera kwamuri. Uye ini kazhinji kuda nziyo dzenyu, uyu akandiita chikashanduka pane chinhu, uye kwete chete nokuda njodzi yorufu kwakaitika. Zviri risingadaviriki kutendeukira TV kana kuverenga nhau uye ona zvose zvatinogona kuita zvakaipa munyika ino. Handizivi chinhu pamusoro avo nezve nyaya kutsauka chii vezvenhau yakandiudza, kunyange ndinofanira kutaura ndine zvimwe pfungwa pane mumwe nomumwe. Chii zvinorwadza zvikuru kwandiri ndiye chokwadi kuti hapana ari kunzwa kufamba vavariro kubva kutsvaka chokwadi uye kuvagadza kururamisira, kuti atendeuka uye alienating vamwe, zvakananga chena rakanaka vanhu uye cops. Nzira I kuzviona, chete chinhu kusimudzira rusaruraganda Vaya kumira pakakwirira kutanga kupa nhangemutange yavo uye mhosva yavo. Pakutanga, Ndakanga kuenda kuposita boka Links nyaya ndava mukuverenga kuponda pamusoro chakashata kuti vakatora nzvimbo ichangopfuura kuti chena ganda vanhu nemaoko vatema ganda vanhu, kwete nekuti ndaida kutaura nhema ganda vanhu vari yakaipisisa zvichidzika pane chena ganda vanhu, asi kuti vose pano ari kutambura uye zvose vanobatwa. Vangani chena ganda vanhu vane iwe vakabvunza pamusoro sketchy run dzi vane cops? I hunovimbisa iwe vangobvumira nazvo, cops vanokanganisawo. Im haana kuedza kutora divi pano, yangu ndeyekuti chete nokuchengeta rusaruraganda vapenyu havasi vaya vanonzi chiito ruvengo vaya vorumwe rudzi, ndicho chimwe chiito yokuzvidzora anokurudzirwa ruvengo, kururamisira ndeyaJehovha. Asi kana nzanga yose kana boka kuramba kutenda kuti matehwe avo anoita chero nevamwe. Avo vanotenda matehwe dzavo dzinovabvumira kuita kana kuzvibata kudzora vamwe kana anovapa mvumo chaiyo kuti vakagumburwa. Nhangemutange haisi mhosva. Uye ganda redu harisi ani isu tiri, kana isu akakurira Africa kana Mexico, Ganda redu ruvara haisi tsika dzedu kana nhaka. Handidi kuziva imi sezvo Trip Lee nhema murume, uye handidi pakunzi Jakobho nhema murume, kana Jakove murume chena. Ndiri Jacob, uri Trip. We chete mberi kamura ichi kukura nokubvuma kuti kunyange ipapo. Asi hakuna kamura. hama All. hanzvadzi All. All vanakomana nevanasikana Ishe. Ndine urombo kuti uri kurwadziwa murume, kuvonga vose waita rwakafuridzirwa muupenyu hwangu!
Burton • Zvita 4, 2014 pa 4:13 pm • pindura
Hapana asi mukoma chokwadi, kunyange ndiri chena, Ndinoda kupinda pabhokisi pamwe ya'll, uye neshungu kana iwe shungu. Ndanga zvinotevera iwe kwenguva yakareba uye njanji iri definately mumwe wangu vaaida! Idai zvauri kuita kwatiri kuburikidza Ishe Trip, ramba wakadaro.
Dayo • Zvita 4, 2014 pa 4:25 pm • pindura
Coulda anga munhu… Trip Lee * thumb *
Shelby • Zvita 4, 2014 pa 4:35 pm • pindura
Hey rwendo, ngaavongwe nokuti kugoverana mwoyo wako. Nepo handisi muduku mutema murume, uye ndirege nokusingaperi zvechokwadi kunzwisisa, Ndiri kuedza kurwadzisa nemi. Thanks yokurerera zvokuti dzakaipa nemapurisa uye kuti kuoma kuti 90% zvakanaka vakuru uye ndinoda pfungwa dzako kuti isu munokosha zvose zvakafanana nomufananidzo waMwari uye kuti ndipo tariro yedu inofanira kuva. Grace uye Peace Brother.
TBrant • Zvita 4, 2014 pa 4:38 pm • pindura
Ndinonzwa iwe pamusoro acho murume. Ndine urombo kuti izvi zvakaitika kwauri kare uye ndiri vachikuvadza nemi sezvo vose vaya vanotambudzika nechisimba ichi. Kurarama rudo uye kufamba nevamwe, zvichireva kurwadzisa navo uye chemai navo, ndizvo zvatinofanira vanonzi chokuita nevaya vari kutambura. I vanokumbira munamato sezvo ndiri Parizvino kunetseka nezvinhu somunhu oga oga asi ndichange kuchengeta iwe uye vanhu imomu mumunamato uyewo. Rudo iwe BRO. Dai haana kusangana nemi asi ndinokudai.
Andrew • Zvita 4, 2014 pa 4:43 pm • pindura
Handisi kunzwisisa #couldabeenme ichi. Trip Ndava dzinoshandisa kwenguva yakati kuti kwete iwe asi vamwe rappers vechiKristu kuti zvino kutaura zvakaitika muna Ferguson, Zvisinei ndava mwoyo ichangopfuura pamwe kuchema pamusoro Ferguson.
Ndiri kuenda kuva upfront ndiri 25 egore chena munhurume. Handisi kunzwisisa zvazvinoreva kuva vashomanana States. Handisi sokuti handina akamboradzikwamo kudhonzwa pamusoro nokuda nhangemutange yangu. Handina kumbobvira patted pasi nokuda nhangemutange yangu. Handina kumbobvira zvadzivisa nokuda nhangemutange yangu. Ava zvinhu I pum kutaura Ndinonzwisisa.
Apo tiri kutaura pamusoro pezvinhu I pum kunzwisisa anorega kutaura pamusoro #couldabeenme Tag. ZVAKANYANYA?!? Zvinogona kunge iwe?!? Ungadai chakabiwa pazvimonera kubva yakakunakira chitoro uye havana kuteerera munhu COP? Ungadai kudzivisa nokusungwa? Ungadai yakarohwa kana mumuviri kukuvadzwa mupurisa akapfeka yunifomu?!?
Ndiudzei sei ungaita izvozvo!
Munoonaka apo ndinonzwisisa kuti ini handingatongogumburwi kuziva zvazvinoreva kuva vashomanana US I vakambogara mhiri kwemakungwa. Ndakagara Europe nokuda 8 makore. Nepo mumigero Europe ndakaziva kuti yose nyika ane zvakasiyana tsika. chimwe chezvinhu mhuri yangu akawana kuti yakanga anonakidza akanga pose tinosangana munhu mutema mu Europe vakanga kubva UK. Munhu wose vavo vaitaura Chirungu kwakakodzera uye vaiva noruremekedzo chaizvo uye zvakanaka akapfeka. Hapana kana mumwe wavo akapfeka mbatya dzavo kumativi pamabvi avo.
Unoona paiva yakasiyana tsika uko zvakanga zvisingagamuchiriki nokuti uduku sevadzidzi thugs. Muno US mune muhomwe tsika apo zviri zvinoitika, kunyange akamusimudzira sevadzidzi thug. Nei izvi zvakadaro???
Izvi zvose zvine chokuita Ferguson?? Zvakanaka wose anodana ichi Michael Brown mbudzana mbudzana akanaka. Ndinoreva ari kuenda kukoreji! Zvakanaka kubva kana ari kuenda kukoreji wakaenzana kuva mbudzana akanaka? Anorega kutarisa zvinhu akanga asiri mwana akanaka. Aiva mbavha uye aiva dambudziko muiti. Pakupedzisira haana kuteerera simba uye izvi pakupedzisira kukonzera rufu rwake.
Chii handisi kunzwisisa Trip ndechokuti kuti izvi zviitike, nokuti “couldabeenme” ungadai aifanira kuita izvi zvakare. Ungadai aitofanira kuba kubva muchitoro uye ipapo akarwa COP kuti vakarega here pashure.
Pakupedzisira, chii chakaitika zvinosiririsa! Zvisinei hazvaikwanisa kunge iwe. Hakwaigona ini ndanga. Izvozvo hazvisi nokuti ndiri 25 egore varume. Hakusi ndingadai kuba uye ini vaisazorwa munhu Exchange. Avo vari nyaya pano. Not rudzi.
Kori • Zvita 4, 2014 pa 4:46 pm • pindura
Michael • Zvita 4, 2014 pa 4:48 pm • pindura
nyasha, runyararo, rudo netsitsi kuna Mwari wedu uye Baba
Chekutanga, Ndingada varumbidze Jehovha ruponeso uye mushandi Hood wenyu mukoma. Iwe kumiririra Baba zvakanaka. Ndiri akaropafadzwa kutaura kuti uri wokutanga Artist kuti Mwari akashandisa yekudyidzana tinzwe kufamba kwangu mangwanani ruponeso rwangu. Vakapindira vakaponeswa December 2006 uye ndakanga saka zvikuru midzi muna Hip Hop / Urban tsika kuti zvakanga zvakaoma sanduko chete kuteerera kunamata wepanguva, “I Love Music”. Koshesa Hurukuro yako uye zano panyaya nemagariro ruzivo sezvo chokuita nokunamata chebhaibheri uye sei dzinosiyana.
Dai Ishe akuropafadzei uye nekuwedzera zvibereko iwe basa!
Pastor Bill, nyasha uye rugare kwamuri…kunyange Ndinobvumirana zvizere panyaya tichidzivisa kusungwa Ndinoona kuti pane mitemo inofanira atsigira uye kutevedzerwa zvisina kukodzera maitirwo ezvinhu / zviito.
Michael • Zvita 4, 2014 pa 4:50 pm • pindura
Totally vakakanganwa kufungisisa rwiyo. hama dzangu dzinodiwa ndinotenda rwiyo urwu rwakaripoteredza chii kwechokwadi hip iri uye chii akasikirwa kuva…
Zander • Zvita 4, 2014 pa 6:10 pm • pindura
Me pachedu Handibvumirani norwiyo urwu. Anoratidza rusaruraganda kuti zvechokwadi muAmerica. Munhu wose anonyunyuta kuti nevachena vari musaruraganda nokuti vakaita ipapo basa. Kana chaiva munhu mutema uyo akapfura mbudzana (uyo akabata vakuru pfuti) amupfura hapana kwaizova zvataurwa zvose. Just kwangu uye pamusoro dzoruvengo :)
Jason • Zvita 4, 2014 pa 6:24 pm • pindura
Ndinoonga chido chako kuti nhaurirano BRO. Tine nyaya munyika kuti kuva rufu zvose kumativi uye nzira chete kuita kuti kuburikidza naJesu Kristu!
Tinofanira kuratidza wose rudo rwaKristu – saka ndakaisa pamwe zvishoma yakanaka vhidhiyo rudo… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
Whitney • Zvita 4, 2014 pa 6:26 pm • pindura
Izvi ndizvo chaizvo sei Ndinonzwa! Ichi chakanaka uye yakachena okuti. Kunyengetera pamwe uye imi BRO! Ndinokudai uye kunzwisisa zvose ushumiri hwako.
Ben • Zvita 4, 2014 pa 7:15 pm • pindura
Trip chete aida ndikuzivisei Ndiri vachikuvadza iwe uchinzwa kuremerwa kuva chikamu chemhinduro. Ini ndiri mukomana mukuru pane imwe chechi Suburban nevana varungu, Ndakapedza Wednesday wangu usiku kudzidza navo okupedzisira usiku Diving kupinda Gods shoko achivabatsira kunzwisisa nei paine akuvadzwa kumativi ose, sei sevatendi tiri kuti rudo kavha zvose uye regai chiedza Kristu chipenye, sei isu tiri kuchema neavo vanochema uye vafare nevaya vanofara. Ipapo aipedza manheru ano @ chiitiko rinonzi Faith RX zvamungadya uchiziva, kupa kuti shoko chete kuti vakuru. Ndinoziva inoenda kupodzwa akareba vose vanobatanidzwa uye vachava chete kuitwa chaiko kana takatarira pamusoro Mambo uye kurarama saKristu. Ndine urombo kuti marwadzo kumativi ose uye kuti muzive Ndave uye vacharamba kunyengeterera mwoyo shanduko pakati pevaya vane mapofu maziso. Ramba musoro wako, Mwari akatendeka uye akanaka, uye ukaramba kuita Mwari wakakuropafadzai pamwe, Muri kuita musiyano.
Osakpolo • Zvita 4, 2014 pa 7:43 pm • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda rwiyo urwu nokuti pfungwa iyi yavewo aifungei dzangu. sezvo 21 egore dema varume muBoston ndinozvifarira kuti ndinogona ndotarira vechiKristu vanhu semi.
angelique • Zvita 4, 2014 pa 7:54 pm • pindura
Aigona kunge mumwe wangu 4 vanakomana! Mazvita Trip. Ndinonamata kuti vanhu achamira kuedza kuhwina nharo uye chaizvoizvo inzwai mwoyo yavanhu vedu.
GageGuest • Zvita 4, 2014 pa 8:24 pm • pindura
teip Lee mwoyo wangu haafari uyewo pashure pokuona ichangobva vhidhiyo murume gettin chocked rufu.
Ini ndisina kutongwa imi vakomana pamusoro kutaura. Ndakatarisa kubva rechitendero vanhu vanoona pane murayiro kudanana. Ndine urombo kuti hama muna Jesu I Watonga ndisina mhosva.
Ndinoziva kuti handina akakwana uye ndinoda Gods rudo nezuva. Iye kwave ichiyevedza kwandiri. Haana upenyu hwangu nhasi kubva inotyisa mwoyo kurwisa. Ndakafunga aizofira asi haana kubvumira izvozvo.
Ndava kuparadzana pachangu kubva zvose zvangu mumagariro nevezvenhau (zvinomuomera kuikanganwa navo) kuva pedyo uye kufamba naJesu muMweya Nechokwadi!
Kana uchida kutaura kana kuita chero zano nhamba wangu 580-509-5059
Mauricio Arriaga • Zvita 4, 2014 pa 10:45 pm • pindura
Unogona kunyengetera ndirini BRO ndingadai unonyatsokoshesa nayo Ndinonzwa Iike ndinoda zvikuru mwari nekuti handina zvakakwana naye ndiri 13 egore mukomana kubva Kerman California uye imi vakomana muri basa rangu muenzaniso Ndiri muKristu asi ini vanoramba kudzokera nechivi uye ndine kumboneta kumhanyira chivi ndinoda kuchinja upenyu hwangu Ndinoda kuva chisikwa chitsva muchikwanisa nyengeterai kuti mwari anoita kushanda pandiri saka ndinogona kuva muKristu nani <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patricks Ny Jr. • Zvita 5, 2014 pa 12:06 ndiri • pindura
Handina kuteerera rwiyo asi mashoko acho chete inoti zvose uye ndinoziva kuti chakanaka rwiyo chikonzero ndizvo zvaunoita zvakanaka. Mwari vakuropafadzei zvikuru
NicholasTracy • Zvita 5, 2014 pa 1:30 ndiri • pindura
Pakutanga, kana ndakaona namagwatidziro izvi, Handina kuwana nayo. Ini akanyatsorevesa chete akafunga kuti kunetsa, uye handisi zvokusada kuti ikozvino. Pashure pokuteerera ichi rwiyo uye Derek Minor raMwari achangodarika kusunungurwa, Ndakayeuchidzwa kuti nyasha chakakura chikamu ichi, uye chikamu ndakanga kurasikirwa zvikuru. Handina kutora nguva yokufunga nezvazvo kubva kumaonero akasiyana. Somunhu pakati-kirasi chena mukomana kupinda yunivhesiti, Ndaiva zvakaoma nguva kunzwisisa kuti tiri akatarisa zvakasiyana nevamwe, iwe neni. zvisinei, kamwe ndakatora nguva yokuita kudaro, meso angu akavhurwa kuti yakasiyana nzvimbo pane nzvimbo dzandakamboenda hwangu hwose. Ndinoda ruregerero nomwoyo wose asina kutora kuti nguva kuona zvinhu nemaonero enyu, uye ndinoda kukurudzira munhu wose kunotaura zvose izvi nenyasha mupfungwa. Zvinokosha. Ndinokutendai nokuisa rwiyo urwu, Derek Minor nokuti kusunungura ake, uye vose 11Six vashandi vakataura pamusoro nyaya iri uye vakagoverana uchenjeri hwavo.
Kentrel • Zvita 5, 2014 pa 1:58 ndiri • pindura
Trip Lee rudo zvikuru pamusoro uyu rwiyo murume hapana nhema. Taida kwakadai rwiyo kudhonza kubva munoyerera mvura yetsvina misoro yedu, uye ona kuti Mwari anoda kuti tiite. Ndiri pane basa rangu kuita rwiyo sezvinoita murume uyu. Dai Mwari nesu tose kubatsira panguva ino yakaoma.
Edward • Zvita 5, 2014 pa 8:11 ndiri • pindura
Ini ndiri mufundisi weimwe chechi mutaundi duku Harare uye ini usaora kumiswa nemapurisa pasina chikonzero……..zvakare. Asina yagara zvakadaro. mukoma wangu dzakamiswa uye akaudza kubuda mumotokari aine pfuti uye tose kwaiva ngarurege muguta kuchamhembe Wisconsin. taiva 19 kana 20 zera. Makore mashanu akanga apfuura takanga vachifamba pamusha uye motokari mapurisa neminhenga zvishoma nezvishoma isu matatu kutigumbura kana kuti pamberi pedu kurega. Vakati isu akafanana nevamwe yevaifungidzirwa ari ugororo.
Ndakati izvozvo zvikasaitika zvakare achinyatsodavira kuti ichiri kuti zvinhu zvinogona kukurumidza kuenda chakakanganisika zvikuru zvinogona uye.
I wakatangwa kuburikidza Kaa kuti muKristu Hip Hop uye ini kuteerera mashoko nenziyo dzenyu dzose nguva. “simuka” ushamwari, chando, chando.
Mashoko ako kutaura chokwadi pamusoro Kristu noushingi uye 116.
Ndinoonga kwakasimba uku panguva guru mufananidzo anotarira uye asingauyi vaparadzane uye pfungwa imwe chiitiko.
Kana iwe wakati nomumwe mutema munoziva akamborara ichi…Ini ndiri mumwe wavo.
Kunanavira kwandiri chero nguva.
Ramba kuparidza mukoma.
OtiatoMargy • Zvita 5, 2014 pa 10:06 ndiri • pindura
Chokwadi shamwari tine Jesu; ALL zvedu uye matenda kutakura, zvose nokuti tinoita hapana kutakura zvose Mwari mumunyengetero.. Zviri oma ASI Mwari anokwanisa gamha kana isu dzinoshandura asingabatsiri yedu zvachose kuti nyasha dzake kuti kunopfuura yakakwana. Tinogona kubvunza mibvunzo yakawanda, mubvunzo kuzivikanwa kwedu etc., asi kurasikirwa zvose mhinduro Mwari akatopindira inopiwa muShoko raKe kana chete isu Nzverai magwaro. Kana isu nokusingaperi aida Mwari, ndicho NOW kuti kutenda, sezvo tikaziva hurongwa tinovimba kudzivirira vativimbisa. Mwari ndiye nzvimbo yedu yokupotera uye simba mubatsiri ari pedo-pedo panguva yokushayiwa… Tariro yedu iri Ishe Mwari weBhaibheri kubudikidza naJesu Ishe wedu uye Muponesi uye muchinda werugare, zviri kufa saka tiri kugamuchira unodikamwa kusunungurwa zvisinei kusiyana kwedu nezvikonzero izvi Akatora nzvimbo yedu. Hatifaniri kumirira mumwe chiitiko vanotozvikuvadza panguva ino mwero, ngativandirei kudzokera kuna Mwari, rudo vedu vokutanga. Isu takasiya Him asi haAna vatisiya. Ari kumirira, kurapa maronda edu uye kuti vapfeke nesu umambo saka tiri chiremerera sezvo vana vake havana kunyadziswa sevaranda vasina kodzero. Mwari ndiye Baba vedu, tiri kwaVari, Iye anokonzera Dad tinofanira Him! Ane zvose zvatinoda kusanganisira kodzero dzevanhu!
Sammychris68@gmail.com • Zvita 5, 2014 pa 10:10 ndiri • pindura
Its kwete chete American, zvinoitika kwose kwose munyika…Ndinoparidza apo hama kupiswa vaainamata mukoma Alife kubudikidza peturu nokuti muKristu achiri muMuslim, apo 3 mhosva mudzidzi apo yakatarwa dzamabatidza kuti mhosva vakaita kwete portharcourt Nigeria, apo kubhomba kuzviuraya kunovapo, apo masoja vauraya rose mugari munzvimbo nokuda chikonzero enyika, Nigeria ndiyo imwe nyika kuti zvinoshamisa zviri kuitika munyika bibble zvinoitika. Tinoda minyengetero muUri rose…Kugara vechiMuslim hakusi nyore.
MargureteMensa • Zvita 5, 2014 pa 2:31 pm • pindura
Whatev. Heunoi pfungwa: quitcherb * tchin, kukura zvinobatsira chinhu chakanaka kuti vanhu kunze kuzvida hwakavakirwa manzwiro ako. Unovaona nzira pamusoro Rated.
Marchauna • Zvita 5, 2014 pa 3:07 pm • pindura
Aiva ropafadzo kunzwa iwe pana WinterJam Spokane, Washington uye akakomborerwa zvikuru nemimhanzi yako. Zvazvakaipira website yako nhasi uye akaona romukova kwenyu pamusoro Ferguson. Ndinokutendai nokuti kugoverana. Mwari chete achangobva akasvinudza meso angu kuti chokwadi pamusoro rusaruraganda uye kusarura muna US uye muKereke. Aputsa mwoyo wangu, uye ndiri kuedza kudzidza zvakawanda handigoni ndinogona kuva saka yemubhaibheri, Mwari-kukudza mafungiro. Your romukova wandibata zvikuru uye anondipa chinhu chokupa nehama nehanzvadzi vane mwoyo uye meso vasina akazarurwa asi. Kunyengeterera kuti Rev 7 Church uye Mutsvene kuunza nechivimbo kuti vanhu vake “ari West”. Ndapota musaneta kana kurega asi…Mutumbi waKristu anoda shoko renyu, kuona, uye chido.
fundmc • Zvita 5, 2014 pa 3:17 pm • pindura
Idai mashoko akanaka. Tinofanira kuramba kutenda kwedu muna Jehovha uye yeuka kugoverana vhangeri iri dzakaoma.
L • Zvita 6, 2014 pa 11:33 ndiri • pindura
rwendo, ndotenda kwazvo. Ndinokutendai nokuti rudo vamwe pavanenge kuvenga iwe. Ndinokutendai pakugamuchira mwoyo kwaKristu kuchechi kwake – rakabatana mumwe – uye kufamba saiye, kana zvakaoma uye kana zviri nyore. I kukukudzai nemhuri yako uye yakadzika unofanira aenda kuda Jesu zvakanaka. Ndatenda.
Kathleen • Zvita 7, 2014 pa 3:11 ndiri • pindura
Ini chete vakagumburwa mhiri ichi uye Wanna vanoti wako ashande zviri zvechokwadi, kubva mumwoyo uye vanoziva. Ndinoparidza kukukuvadzai uye kunzwa anoshuwisa newe. Ndinogona kunzwisisa zvakawanda nezvazvo nokuda vakadzi vangu. Ngativerengei souri kuona zuva kana isu kuwana vanhu kwakavakirwa zviri mukati uye tsvaka kunaka kuti uripo.
Margurete • Zvita 7, 2014 pa 12:27 pm • pindura
OK, saka ndinoona kuti uyu anoenda. Chekutanga, Ndinofungidzira ose ndokuisa mhinduro kunge nyasha anosiririsa rwiyo yako sappy kuchema mwana kana ivo usaora neawakatumirwa. Zvino zvikaonekwa kwete iwe kana mumwe wako (zvakanaka) commenters anowana ndyaringo nezvokuti sezvariri zviuru vanhu vanoparara daily pose kubva munhu ari munhu mhirizhonga asi mumwe pamusoro uremu, asthmatic mutema murume afa apo kuramba nokusungwa, ruchinge kubatwa pamusoro kamera uye ikozvino tine sainted iye, Wakapatawo nhangemutange kadhi, akatsoropodza mapurisa ose munyika sezvo kunyanya nesimba uye akadana National chimurenga. Just mubvunzo mumwe: kana iri munhu akanga ashanda sezvaakanga nesimba chouviri pachake uye mhuri yake ari pamutemo, pamutemo zvimwe netsika fashoni panzvimbo muunzenza nomutemo basa kuti achiri mupenyu nhasi? kuva kanenge tingadai wakarega yako sappy kuzvinzwira tsitsi.
WhiteVictim • Zvita 8, 2014 pa 4:05 pm • pindura
Ini ndiri murume chena anoshanda pauduku kubva akasiyana-siyana uye vanobva kwakasiyana. Pari zvino, 80% veboka rasviba uye rwiyo yenyu anogumbura ini. Handina yakatengwa makopi akawanda wako CD kuti kupa kune boka asi hapana zvimwe. The pafiripi divi rwiyo yako “ini kunge It aigona kunge” ndiko kuti uri chaizvoizvo vachiti, “Zvinogona kunge kwamuri” (chena murume) vaigona vakaita izvi kwandiri (mutema murume). Muri WHITEwashing nyaya chaiyo mwoyo uye kuti ndiyo CHIVI. unofanira Zvaaiva Artist vechiKristu vanoziva nani asi uchiita nevamwe vari kuita: uri hwekutorawo kufa vamwe kutengesa mimhanzi yako uye kuti mari. Muri kuziva vakasiyana Al Sharpton. Tapota verenga nyaya chibharo & kuuraya chena vaviri Channon Christian, 21, uye mukomana Christopher Newsom, 23 mumaoko vanhu zvakaitika kuti vatema. nyaya iyi haana akaita misoro nokuti zvinotyisa kufa nevachena havana kutengesa mapepa kana Rap nziyo. Zvinogona kunge iwe asi zvechokwadi chakaitika kwavari. saka, nei here nziyo nezvazvo kuti. ovimba, uchava kubvumira izvi kuti neawakatumirwa uye kuramba takaisa.
Tom • Zvita 8, 2014 pa 10:54 pm • pindura
Wow. Zvinofanira kuva mufaro kuva akuvara hwako hwose. Nenhamo Zvechokwadi anoda kambani, Zvisinei.
rwiyo Your akapotsa akandiita urombo neniwo kufunga ose anorwadza chinhu nokusingaperi wandiitira. Chii chakasiyana pakati pangu newe uye? Ndakasarudza kudzidza kubva kare, uye mberi. Zvimwe ndakava zvakaipa. Pamwe I akaitirwa zvakaipa. Ndiani ane hanya.
Ndiri akasimba kupfuura.
p.s. Ndiri chena munhurume, uye neniwo vaitofanira achisangana vatevedzere mutemo sezvo kuyaruka kumboverenga kupiwa mhosva. Ndinotenda Mwari nokuti mumwe nomumwe wevaya ezvinhu uye kuti ndakadzidza kubva kwavari.
Thomas • Zvita 10, 2014 pa 11:38 pm • pindura
Trip Lee ndiye chiedza-ganda saka, iye anogona zvakaitika chena. Mudzimai wake nevana vari zvakare chena achitarisa. Sei vanozviti chaizvoizvo vatema kana zvakafanana ruzivo sezvo vanhu vatema.
Hongu Ndine chena uye kunyange ndinoziva kuti upenyu huri nyore kuti vatema vane ganda rima.
Uyai, Ishe Jesu!
Trip Lee • Zvita 22, 2014 pa 1:59 pm • pindura
MASHOKO Izvi anotambudza uye inoratidza sei zvishoma here kunzwisisa upenyu vanhu nhema America
Lori • Zvita 21, 2014 pa 4:14 ndiri • pindura
nhasi, sezvo kuuraya maviri NYPD vakuru, I pakupedzisira ndakafunga kuti ndinoda vandoshora vhidhiyo Eric Garner_I akaiona, Ndaigona chete kubata kukaona kamwe; Ndiri zvachose muna Zvanzi-tenda!! The misodzi vari ruchiyerera….sei fucking angatsunga ari cops, sei Dar navo !! Ndine urombo kuti mhuri Eric kuti, uye shamwari. Ndinonzwisisa kuti akanga chaizvoizvo munhu mukuru, wakanaka, kupa mweya. Rip Eric Garner.
Ndiri White hadzi, mukutanga dzangu okuma50, Handina kumbogara mumaguta akaita apo Eric akaita. Ndine ropafadzo angambosvika; Ndinoshanda, vane matambudziko kuita magumo sangana; Ndave zvakaipa basa panzvimbo; chaizvoizvo kutyisidzirwa, vanogumurwa, pane zvinopfuura chimwe chiitiko; Handina kodzero, hapana ane basa nazvo, ari EEOC, ari crock pamusoro ….! Muupenyu hwangu, Ndarota run mu kana vaviri ane cocky mupurisa; asi, Handina Aivawo zvakaitika zvakawanda mapurisa akanaka. Hapana chikonzero chakanaka yokuti zviito akatorwa pamusoro NAERIC; akanga SO chibharo, uye kumboda vakaurayiwa panguva ramaoko cocky mupurisa. Handigoni kunzwisisa kukundikana kwedu nezvamakatonga hurongwa; Ini chete Ndaikudzungudzirai musoro wangu, Handizive zvekuita; apo pokuona nhau, uye kuteerera stories_it repulses ini! Vabereki vangu vakandidzidzisa kuona ruvara(S)… tiri tose chimwe; isu tose zvinobva siyana vanorarama; vazhinji vedu tine nokutamburira, nokutamburira kwakawanda kwoupenyu; asi chete neropa runoyerera kuburikidza mutsinga dzedu. kunyange zvazvo, Handina kumbobvira pane “kururama divi mutemo;” mukoma wangu ane, iye kuti ndiye White, Akaita zvimwe nguva mujeri(10yrs) vamwe mhosva zviduku vakanga Varidza chose kubva zvinoenderana; ava nokuda pamusoro 15yrs ikozvino; akanga apo ane neketani rundarira kwechinguvana(2yrs,) saka yakanga chikonzero yomunharaunda cops kuti kumuziva zvakanaka, uye dzichikunetsa iye, nguva nenguva, panguva iyoyo. Patova 15yrs, pamwe NO nyaya, uye achiri anobvamburwa hassled nanhasi, zviri pathetic; ichiri kubhadharira mhosva, kunyange zvakanaka akapedza nguva yake. Hazvina chete Black dambudziko, ndizvo zvose dambudziko redu. Pane zvakawanda chakaipa zvose nhasi, uye kumboda, tichinyatsoda havana kodzero…nekuti tiri zvakaipa kana tikasaita kuzviita yakarurama ipapo, uye kurangwa neimwe nzira kana mumwe. kunyange zvazvo, pane zvakawanda vanhu vakaipa munyika ino, munhu kuti vasinganyanyi kuremekedza upenyu mumwe munhu, mbavha, thugs range zvose; tinoda mapurisa kubatsira kurwisa mhosva; vanoita ngozi ikoko anogara mazuva mazhinji; asi avo kuzvidzora, nezera ravo simba, kushaya kuteerera vanhu, pfungwa yavo cockiness; chinonyanya nguva dzose nyaya unemhosva, kusvikira nekusimba mhosva, uye vanhu vose pamusoro rudzi urwu vari kubatwa akafanana vane zvishoma pane mupurisa(“mutemo mukuru.”) IT vanofanira kurega! Our “hukuru” nyika, haasi mukuru panguva ino…kutanga hurumende, zvinyoro pasi kumapurisa vemo.
Back to Eric, zvakare, Ndine urombo, uye zvinosuruvarisa kuti mhuri yake uye shamwari. I misfortunate chaizvo chiitiko…Ndinovimba kuti kubudikidza nokutsungirira mhuri yake achawana vamwe kururamisira, Zvechokwadi hazvitsivi Eric.
Rugare ngaruve nemi mose.
Lori • Zvita 21, 2014 pa 4:20 ndiri • pindura
ndima yechipiri kanofanira kutaura kuti handirevi neropafadzo angambosvika! Iii.
AJ • Kubvumbi 8, 2015 pa 9:49 ndiri • pindura
Handitombozivi kuziva kutanga. Ndizvo chaizvo Ndinonzwa uye handisi kunyange American asi kuva vatema, tichiziva kuti vanhu vari kudzvinyirirwa uye kunyange kutourayiwa nesimba ndiye dzinoshungurudza mwoyo chete, uye zvadaro kuziva kuti ndiye simba zviri kure kudaro kunoita kuti zvakaoma kudavira chero kururamisira mugadziriro, kwazvo. Ini wambonzwa mhuri dzinobatanidzwa uye sei, zvose kubva vawirwa kana vapari vemhosva divi.
Tammy • Kubvumbi 9, 2015 pa 6:31 pm • pindura
Bad cops muri kuiita zvakaipa kuti zvakanaka cops.
Kianna • Chivabvu 20, 2016 pa 4:35 pm • pindura
Vaivimbwa Online In Indonesia • Chikunguru 17, 2017 pa 5:39 pm • pindura
Ndinonakidzwa kuverenga nyaya achaita vanhu vafunge.
wo, Ndinokutendai kubvumira kuti ini kupindura!
mumhanzi manotsi • Chikunguru 19, 2017 pa 12:25 ndiri • pindura
asi, Akagara wechokwadi mimhanzi yake uye akararama refu zvakakwana kunyora pamusoro 800 nziyo uye kunzwa musics ake kukwira
kubva pakutanga mutsara pazvigaro kusvika kwaya kumira, uko dzaimbova
rarambidzwa. With kombiyuta ine simba, vamwe mics, digital Audio workstation, uye zvishoma anoziva,
munhu anogona kunyora uye kuparadzira mumhanzi. asi
ipapo, veMubatanidzwa Indaneti, Broadband, compressed makaseti zvinogona uye zvakawanda
inotakurika vezvenhau vatambi zvakakonzera echimurenga kuchinja indasitiri ino.